Pro 13 | Mal1865 | STEP | Ny zanaka hendry mihaino ny fananaran-drainy; Fa ny mpaniratsira tsy mety mihaino, na dia anarina mafy aza.
1 Ny zanaka hendry mihaino ny fananaran-drainy; Fa ny mpaniratsira tsy mety mihaino, na dia anarina mafy aza. 2 Ny vokatry ny vavan'ny olona no ahazoany soa; Fa ny hampidi-doza no mahafaly ny mpivadika. 3 Izay mahambim-bava no miaro ny ainy ▼
; Fa izay vavàna dia haringana.
6 Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny; Fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota. 7 Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be.
8 Ny haren'ny olona dia avotry ny ainy; Fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory. 9 Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra ▼
▼ Heb. mifaly
; Fa ny jiron'ny ratsy fanahy ho faty.
13 Izay manamavo ny teny ho voasingony ▼
▼ Na: mahavery tena
; Fa izay matahotra ny didy no hahazo valim-pitia. 14 Ny fampianaran'ny hendry dia loharanon'aina Ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana.
17 Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza; Fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana ▼
▼ Na: fanasitranana
18 Fahalahelovana sy henatra no ho an'izay mandà famaizana; Fa izay manaiky anatra no homem-boninahitra. 19 Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka ▼
▼ Na: efa mitranga
; Fa fahavetavetana eo imason'ny adala ny hiala amin'ny ratsy.
20 Izay miara-dia amin'ny hendry dia ho hendry; Fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza ▼
▼ Na: ho ratsy
. 21 Ny mpanota dia enjehin'ny loza: Fa hovalian-tsoa ny marina.
23 Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be; Fa maro no ringana noho ny fanaovan'izay tsy rariny. 24 Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany; Fa izay tia zanaka dia manafay azy, raha mbola kely.